Chikwata chekunyora - Spielpunkt - mitambo yebhodhi nemitambo yemavhidhiyo
Spielpunkt: Pamhepo kubvira 2014
Muzhizha ra2014 takatanga iyo portal pasi pezita Spielpunkt - Brettspiele und Gaming, mushure mekutangwazve pakutanga kwa2020 uye nekuwedzera kwemhando yemisoro yatinodaidzwa kuti Spielpunkt - Mitambo und Varaidzo. Isu takatanga imwe ongororo yakakosha yewebhusaiti pakupera kwegore ra2021.
Chikwata chedu chidiki chevanyori chinoburitsa nhau dzichangoburwa, bvunzo, wongororo uye zvinyorwa zvemitambo nenyika yevaraidzo.
Ungade here kujoinha nekusimbisa timu yedu yekunyora? Ipapo isu takapfupisa rumwe ruzivo rwenyu uye ne Nzvimbo dzemahara dzakanyorwa munzvimbo yekunyora.
Iwe une mibvunzo nezve chinyorwa kana timu yekudhirowa?